Ukuphupha ngoqongqothwane Discover ➡ Discover Online ▷ ️
9 Ukufundwa kweMin
Ngokwembono yomntu, ooqongqothwane zizinto eziluncedo. Ubulongwe kunye nooqongqothwane abafayo zizinto zendalo zokucoca, ezinye iintlobo zitya izinambuzane kunye nemibungu yazo enokonakalisa izilimo. Kungenxa yoko le nto iladybug iluphawu lwethamsanqa kuthi njenge-scarab kwi-Egypt yamandulo. I-bumblebee, kwelinye icala, luphawu lwentwasahlobo.
Nangona kunjalo, abanye ooqongqothwane zizitshabalalisi kwaye zithathwa njengezinambuzane kwaye zinokudala umonakalo omkhulu kwisityalo. Kwibali likaFranz Kafka "iMetamorphosis", uloyiko olungenangqondo lwesi sinambuzane luba libali elingaqhelekanga: umlinganiswa ophambili uvuka ngenye intsasa njengesilwanyana esiphazamisayo.
Ukuba umntu uphupha ngoqongqothwane, usenokudana ngabo, abanye abantu bayoyika kwa ezo zinambuzane zisoyikayo ngokufanayo, ngakumbi ukuba, umzekelo, ibhungane elikhula lide lifike kumasentimitha alithoba ubude libonakala emaphupheni. I-ladybug ngokungathandabuzekiyo iya kubangela iimvakalelo ezahlukileyo kune-beetle eqhelekileyo, isampulu enye mhlawumbi ayikhathazi xa uphupha kune-avalanche yezilwanyana ezirhubuluzayo. Ke ngoko, zonke iinkcukacha zephupha zibalulekile ekuchazeni iphupha.
Lithetha ntoni iphupha ngoqongqothwane? Amanye amaphupha ahambelana nempazamo aqhelekile kunamanye. Funda nzulu malunga namaphupha oqongqothwane aphezulu:
1 Uphawu lwephupha «iBhungane» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Apho kungabonakala khona ibhungane
1.1.1 Ooqongqothwane kwigumbi lokulala: bavela phi ephupheni?
1.1.2 Wowu, nguqongqothwane ebhedini! Ukutolikwa kwamaphupha
1.2 Uqongqothwane uhamba emzimbeni wam ephupheni!
1.2.1 Iphupha elizothe: ooqongqothwane emlonyeni.
1.2.2 Phu! Ooqongqothwane bakhasa ngendlebe: uhlalutyo lwamaphupha
1.2.3 Ooqongqothwane phantsi kolusu, liphupha elinjani lona!
1.2.4 Xa iibhugi zingena ngenwele zakho. Lithetha ntoni iphupha lam
1.3 Iindidi kunye neempawu zooqongqothwane emaphupheni
1.3.1 Uqongqothwane, ipilisi yokujika okanye ibhungane kwilizwe lamaphupha
1.3.2 Inambuzane enomtsalane: inkungu ngundo njengophawu lokulala
1.3.3 Umbono omkhulu - umkhombe we-rhinoceros ephupheni
1.3.4 Uqongqothwane omnyama uvela xa ulele
1.3.5 Ngaba ibonisa ingozi? Ibhungane eliluhlaza ekuchazeni amaphupha.
1.4 Ooqongqothwane kunye namaphela avela kunye ephupheni.
2 Uphawu lwephupha «ibhungane» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ibhungane» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «isikrufu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iBhungane» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Apho kungabonakala khona ibhungane
Ooqongqothwane kwigumbi lokulala: bavela phi ephupheni?
Abaphuphi abaninzi baxela ukuba babona irhamba libhabha lijikeleza iflethi. Le meko yephupha ifanekisela uphawu lweempawu zeli phupha, eliziphazamisayo. Ngokucacileyo bayamcaphukisa umntu ekubhekiswa kuye. Ukuba ibhungane okanye inyosi enkulu ibhabha ezindongeni zayo ezine ephupheni, ulonwabo luyanyamalala okomzuzwana - umphuphi uya kuqaphela ukuba ngalo mzuzu wephupha kukho into engahambi kakuhle ebomini. Vuya, amaxesha angcono aya kuza!
Wowu, nguqongqothwane ebhedini! Ukutolikwa kwamaphupha
Ngelixa ibhedi ngenene iyindawo yokuphumla kunye noxolo, ibhungane njengephupha lizisa ukungonwabi kule ndawo isondeleyo nebucala. Ngokufuziselayo urhuqa imicimbi engathandekiyo kunye naye kwaye ke ngaloo ndlela uphazamisa izigaba zokuphupha. Kungcono ukujongana nezi ngxaki zibukhali kunokungazihoyi.
Uqongqothwane uhamba emzimbeni wam ephupheni!
Iphupha elizothe: ooqongqothwane emlonyeni.
Kwimpawu zamaphupha, umlomo uphethe imiba yesini kunye nonxibelelwano. Ukuba imeko ivela ngexesha lephupha apho kukho ibhungane emlonyeni, umphuphi usenokuthetha izinto azisolayo ngazo ngoku. Ngale ndlela ukugxeka okungqwabalala nokungathathelwa ngqalelo komnye umntu (umzekelo iqabane) kuyacaca kwaye kuziphindezela ngendlela yesazela esibi. Kungcono uziphelise iingxabano.
Phu! Ooqongqothwane bakhasa ngendlebe: uhlalutyo lwamaphupha
Ephupheni indlebe yakho yaphazanyiswa yimpazamo? Qiniseka ukuba akukho nto imbi yenzekayo kuwe nanini na. Ngokusisiseko, indlebe imi njengophawu lokuphupha "ukumamela" iimvakalelo zomntu ngakumbi kwaye uzinike ingqalelo. Ukuba uziva kakubi emntwini, oku kunokuboniswa ngempazamo ephupheni endlebeni.
Ooqongqothwane phantsi kolusu, liphupha elinjani lona!
Ingcinga eyoyikisayo yokuba une-bug phantsi kolusu lwakho. Nabani na ophuphayo ngayo unokujongana nabantu "abenzakalisayo" kwi el mundo yomlindo. Kule meko, uqongqothwane ubonakala ngathi uphupha into yokuba ukulungela kwakhe ukunceda kusenokuxhatshazwa. Khathalela lowo umthembileyo kunye nobuhlobo bakho.
Xa iibhugi zingena ngenwele zakho. Lithetha ntoni iphupha lam
Uninzi lwabantu lufumana izinambuzane kwiinwele zabo zenyanyeka. Uyashukumisa ude ususe ukungahambi kakuhle. Ukuba uqongqothwane uyakhasa ezinweleni ephupheni, amandla akhe aba buthathaka. Imeko yoxinzelelo yobomi okanye ubunzima ekuqhubaneni nabanye benza ubomi bemihla ngemihla uxinzelelo ngeli xesha. Qhubeka uhamba.
Iindidi kunye neempawu zooqongqothwane emaphupheni
Uqongqothwane, ipilisi yokujika okanye ibhungane kwilizwe lamaphupha
Kukho amagama amaninzi e-scarab beetle - ibizwa ngokuba yi-scarab beetle okanye ipilisi-tumbler kwaye iluphawu lwangaphambili lwenhlanhla kumaYiputa. Intsingiselo yalo njengophawu lwephupha ilungile ngokufanayo, kuba abo bayingqongileyo babona umphuphi ethobekile kwaye emnandi. Kuphela xa ukhasa ebuthongweni apho iphupha libonisa iingxaki zovalo; ukuphumla kuya kuba kuhle kwakhona.
Inambuzane enomtsalane: inkungu ngundo njengophawu lokulala
Njenga qongqothwane, inyamakazi eneempunzi ezinomtsalane luphawu lwenyani. Iqokobhe elilukhuni lesinambuzane liyalikhusela kwaye ke ngokomfuziselo naloo mntu uleleyo. Umphuphi ubonakaliswa ngokuqina kunye amandla ngaphakathi. Nabani na ngoku ojamelana nonyamezelo ebomini angabonisa ukuba lomelele kangakanani.
Umbono omkhulu - umkhombe we-rhinoceros ephupheni
I-rhinoceros beetle yosapho lwe-scarab ngokwenene inophondo oluncinci entlokweni yayo, isikhumbuza ii-pachyderms. Umfuziselo onjengephupha wemikhombe ungadluliselwa kuhlobo lukaqongqothwane okweli gama linye: kwelinye icala, ukubonakala kwalo mfuziselo kulumkisa ngobuninzi bokungakhathali. Kwelinye icala, iingqwalaselo ngaphambi kokwenza. Uqongqothwane womkhombe umele ukungxamiseka okukhulu ekufuneka kulawulwe.
Uqongqothwane omnyama uvela xa ulele
Ukuba uqaphela ibhungane elimnyama kumava akho ephupha, oku kwalatha kwiimpawu zobuntu ezazingaziwa ngaphambili kuloo mphuphi. Ukuyila kunye nobuchule ziphakathi kweempawu ekufuneka zijongiwe kwaye zikhuliswe. Nabani na ofumana ibhungane elimnyama ephupheni kufuneka aphonononge ezona talente zisondeleleneyo kunye neempawu ngokusondeleyo.
Ngaba ibonisa ingozi? Ibhungane eliluhlaza ekuchazeni amaphupha.
Ukutolika ibhungane eliluhlaza, kufuneka umntu acinge ngoku: Injani imbonakalo eluhlaza yegobongo likaqongqothwane ephupheni? Umthunzi onetyhefu oluhlaza ufuzisela izinto ezingenamsebenzi okanye "ezimbi" zeempawu zomphuphi. Oku kubandakanya umona nomona ngomlinganiselo ogqithileyo. Ingca eluhlaza etyebileyo eluhlaza ibonisa ukulala kwengqondo kwabalalayo kunye nethemba. Ukukhanya komthunzi oluhlaza, ngakumbi kunethemba kunye nokujonga imeko ebomini yabo baphupha ooqongqothwane.
Ooqongqothwane kunye namaphela avela kunye ephupheni.
Izinambuzane kunye nezinye izinambuzane ephupheni zihlala zishiya isiphithiphithi kunye nokungabikho kolawulo, ngakumbi xa zivela kwimihlambi emikhulu. Ukuba isinambuzane esincinci siluma okanye silume ephupheni, zizinto ezincinci kubomi bemihla ngemihla ezixinzelela kwaye zikhathaze umntu ekubhekiswa kuye. Isinambuzane esikhulu esinokoyikisa sibonisa iingxaki ezinobungozi ngakumbi. Ukujamelana noku, umntu ophuphayo kufuneka asebenzise amandla ngakumbi.
I-cockroach ngokukodwa, ebonakala kunye noqongqothwane kwilizwe lamaphupha, ihlala ifanekisela imiqobo ekunzima ukuyisusa. Njenge-vermin, awukwazi ukuphelisa iingxaki nokuba. Isiphumo soxinzelelo, ke kuya kufuneka uphumle kwaye ujongane nobunzima xa ixesha lifikile.
Uphawu lwephupha «ibhungane» - ukutolikwa ngokubanzi
Iqokobhe elilukhuni, Oko kukuthi, iqokobhe loqongqothwane, liyenza ibe luphawu lobunzima kunye nokuzingisa. Uzalelwa ekuchazeni amaphupha. Iimpawu zobuntuukuba ukuphupha kujonga okukruqulayo kwaye ngokubanzi ngendlela engalunganga nayo. Ke ooqongqothwane bahlala betolikwa emaphupheni njengesibhengezo sabahlobo onqwenela ukusisusa kungekudala.
Kwelinye icala, ooqongqothwane babonakala kwiindawo ezininzi. Uphawu lwethamsanqaUkumfumana ephupheni kubuza kakuhle. Ukuba iphupha libulala ibhungane, isimboli yephupha ibonisa ukusilela kwexesha elizayo. Ukuba izinambuzane zirhubuluza emzimbeni, oku kusebenza kutoliko lamaphupha njengophawu lwentlupheko ezayo.
Isimboli yephupha "ibhungane" inokuba yimbonakalo yezinto ezithile kubomi bephupha, elingalijonganga iphupha elo. Kuya kufuneka ubathathe kancinci ngakumbi kubomi bokwenyani. Isenokuba njalo Izinto ezincinci izenzo ezidla amandla kunye nexesha. Oku kunokuhambelana nemimandla eyahlukeneyo yobomi: uluntu, usapho okanye umsebenzi. Ukutolikwa kwamaphupha, umphuphi kufuneka ahlalutye imeko yakhe ethile.
Kutoliko oluthandwayo lwamaphupha, ukubona uphawu lwephupha "ibhungane" kuthathelwa ingqalelo IngcebisoBonakala ulumkile kwaye uthobekile nabanye abantu ukuze ufumane uvelwano. Ukuba uqongqothwane ubaleka ephupheni, ikwabongoza iphupha ukuba likhawuleze, ukuba liyabhabha, ulonwabo nalo luyaphela.
Ngokuqhelekileyo kuthetha ukubonakala kwezinambuzane ezinwabuzelayo ephupheni. Bona y Ubutshaba. Ekutshatyalalisweni komqondiso wephupha, amandla okusombulula ezi ngxaki abonakalisiwe ekuchazeni iphupha. Uhlaselo lukaqongqothwane lukwanokubonisa utyelelo olungemnandanga kwilizwe lokwenyani njengephupha.
Uphawu lwephupha «ibhungane» - ukutolikwa kwengqondo
Njengesinambuzane, uphawu lwephupha "ibhungane" luquka ukungcola, Ukungakhathali kunye nobumnyama bokuziphatha. Izilwanyana ziyahoywa ngokulula, zande kwaye zisasaze inkunkuma. Ngenxa yoko, ekutolikeni kwamaphupha bafumana oko kuqala kungena kungakhange kubonwe emphefumlweni wephupha kwaye kuliluma kulo. Banokuba nobunzima kubudlelwane bothando, emsebenzini, kodwa kubomi bosapho bemihla ngemihla, abathi ekuhambeni kwexesha babeke i-psyche kwimeko yokuphanziswa. Umphuphi kufuneka abuze umbuzo ukuba yintoni emthuthumbisayo ngaphakathi.
Kuba ooqongqothwane bahlala behamba, bekhasa okanye bebhabha, bezingela okanye bekhupha inkunkuma kunye nesidumbu, olu phawu luphupha lumele rhoqo ngamandla kubomi bamaphupha. Ke ubhungane ekutolikeni amaphupha kunokubonwa njengomntu onika intuthuzelo, kuba emva kwenqanaba elibi izinto ziya kunyuka kwakhona.
Kwakhona, ooqongqothwane bajongene kakhulu nesilumkiso. Ukwanelisekaxa imeko irongo, kuba nokuba imeko enjalo ayihlali ngonaphakade. Kwiphupha, kubalulekile ukuba ufumanise ukuba kukuphi okungazi nto okukuloo mzuzu ukuze ufumane intsingiselo yesimboli yephupha esebenzayo kwiphupha lakho.
Njengophawu lweli phupha, ooqongqothwane baseSan Juan baquka izinto ezincinci ebomini umntu ophuphayo akwaziyo ukuzonwabisa.
Uphawu lwephupha «isikrufu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha "ibhungane" lubandakanya ukuzikhusela kunye nokukhuselwa ekutolikeni amaphupha. Kwinqanaba lokomoya, usephupheni uphawu lovuko kunye nobomi obungunaphakade, kodwa kwanoko. Ukuzikhusela ngokuchasene nobubi. Ukuphupha kuphakamisa umbuzo wokuba zeziphi izinto okanye abantu abafuna ukukhuselwa kwaye kufanelekile ukukhuselwa kuye.